प्रकाशित : आइतबार, पुष १५, २०७५१८:५८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
पब्लिक आवाज/जगदिश गिरी
उनले नजिक आएर सोधिन जाने हो दाई । म ट्वाँ परे सोधे कता जाने ? उनले उत्तरसहितको प्रश्न पुनः त्येर्साइन ह्या ल्याङ नगर्नुन् दाई ५ हजार मात्रै हो । म झन रण्नभुल्लमा परे ।
चारै तिर उज्यालो सडकमा जुनकिरी झै सवारीसाधनहरु आफ्नै सुरमा गुड्दै थिए । तलपट्टी सिठ्ठी पूmक्दै हात हल्लाउदै यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सहयोग गरिराख्नु भएको एक जना ट्राफिक दाई । आँहा सच्चिकै रमाइरहेको थिए म । तर आकाशे पुलमा कोही कोही हत्तारीदै पाताल नै नहेरी टिप्पर झै घुइकीएका मान्छहरु ठोकिन्थे उभिरहेको ‘म’ संग । आकाशे पुलमा पनि मान्छेको चाप बढ्दै गइरहेको थियो । समान बेच्नहरु पनि थिए ‘महिला पुरुष बराबरी’ ,यहाँ निर लाग्यो महिला पुरुष बराबर भन्ने नाराले सार्थकता पाएको ।
‘म’ उभिरहेको थिए दाईको बाटो हेदै । अघि बाट एकटहले हेरीरहेकी एक युवती अलिकती मुस्कुराईन म अक्क न बक्क भए । मैले ति युवतीलाई कहिले देखेको थिइन , मेरो मानसपटलले भ्याए सम्म ठम्याउने प्रयास गरे जुन विफल भयो । फेरि हाम्रो तीर चिनेको मान्छे मात्रै यसरी भेटहुँदा मुस्कुराउँथे । म अचम्मित भइरहेको थिए । उनि नजिक आइन् मेरो मुटुको धड्कन बढेर आयो केटी संग बोल्न लजाउने म । उनले नजिक आएर सोधिन जाने हो दाई । म ट्वाँ परे सोधे कता जाने ? ।उनले उत्तरसहितको प्रश्न पुनः त्येर्साइन ह्या ल्याङ नगर्नुन् दाई ५ हजार मात्रै हो । म झन रनभुल्लमा परे । भुलभुलैयाको संसार बाट उम्किन नपाउदै उनले फेरि भनिन् “होल नाईट यो भन्दा सस्तो पाइदैन्” ।
गाँउमा हुँदा बहिनीहरुले जाउ भनेको नसुनेको हैन् तर की त कतै घुम्न गएको बेला साझ हुँदा घर जाँउ भन्थे , कि त स्कुल जाउँ भन्थे एक पटक त तल्लो घरे बहिनीले छिमेकीको काक्रो चोर्न जाउँ भनेको सम्म सुनेको
लेखक – जगदिश गिरी